पछाडिबाट धकेलेँ, भागरथी बेहोस् भइन् अनि… ! « Ok Janata Newsportal
पछाडिबाट धकेलेँ, भागरथी बेहोस् भइन् अनि… !
काठमाडौं । भागरथी भट्ट हत्या प्रकरणमा प्रहरीले सफलता हात पारेको दाबी गरेको छ । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर ७ की १७ वर्षीया भट्टलाई उनकै दाई नाता पर्ने दिनेश भट्टले हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन् ।
उनले भागरथीलाई पारिवारिक रिसिइबीका कारण हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । भागरथी र दिनेशका परिवारबीच लामो समयदेखि मनमुटाव रहेको पनि प्रहरी दाबी छ ।
दिनेश २१ गते दिउँसो लवलेकको जंगलमा विद्यालयबाट भागरथी भन्दा अगाडि आएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसपछि साढे ३ बजेतिर त्यसै बाटो भएर भागरथी पनि घर फर्किएकी थिइन् । त्यसैक्रममा दिनेशले भागरथीलाई पछाडिबाट धक्का दिएर हत्या गरेको स्वीकारेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले ती अभियुक्तलाई पहिलेदेखि नै निगरानीमा राखेको जनाएको छ । शनिबार राति मात्रै प्रहरीले महेन्द्रनगरबाट एकजना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो । घटनामा उनको संलग्नता नदेखिएपछि प्रहरीले छोडेको जनाएको छ ।
भागरथीको हत्यापछि भएको आन्दोलनमा समेत सहभागी भएका ती युवालाई प्रहरीले निगरानीमा राखेको थियो । प्रहरीले ती युवाको चालचलन फरक पाएपछि पक्राउ गरेको थियो ।
आज प्रहरीले दिनेश भट्टलाई ११ बजे सार्वजनिक गर्दैछ । उनले भागरथी हत्यापछि बलात्कार प्रयास गरेका थिए । तर, दिनेशले बलात्कारबारे स्वीकारेका छैनन् ।